Papua New Guinea: MSF oo Soo Gabagabeysey Gurmad Degdeg ah oo wax looga qabanayey Daacuunka - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn/Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa soo gabagabeeyey gurmad degdeg ah oo wax looga qabanayey daacuunka oo ay ka waddey Papua New Guinea.Duucuunkan oo ah kii ugu horreeyey ee muddo 50 sano ah ka dillaaca Papua New Guinea waxa uu ka bilowdey gobolka Morobe bishii Luulyo 2009. Bishii Oktoobar, ayaa daacuun lagu arkey gobolka waqooyiga ku yaalla ee Madang, kaas oo uu ku xigey mid ka dillaacay East Sepik, halkaas oo cudurku si dhakhso badan uu ugu faafey degaannada ku dherersan Webiga Sepik. 1dii Maarso, ayaa waxaa la xaqiijiyey in 2,100 qif uu cudurkan ku dhacay dalka oo dhan. Konton qof ayaa u dhintey.
MSF ayaa horeba uga shaqeyneysey magaalada Lae ee gobolka Morobe waxaana ay awooddey in ay Wasaaradda Caafimaadka ka caawiso in ay isla markii tallaabo ka qaaddo cudurka dillaacay. Kooxda MSF ayaa gobolka ka sameeyey 12 waaxood oo lagu daweeyo daacuunka, laba xarumood oo waaweyn oo daacuunka lagu daweeyo, iyo 22 rugood oo fuuqcelinta afka laga qaato lagu bixiyo. Shaqaalaha ayaa badanaaba ku safri jirey doomo yaryar oo kuwa webiga ah si ay u gaaraan degsiimooyinka laga soo sheego xaalado daacuun.
Kooxda ayaa sidoo kale diiradda saartey kor u qaadista wacyiga bulshada ee ku aaddan daacuunka waxaana ay tababar ku saabsan maareynta xarumaha caafimaadka iyo xakameynta cudurka siisey tiro ka badan 1000 shaqaale iyo iskaa-wax-u-qabsadayaal caafimaad ah.“Waa ay fududdahay iska ilaalinta iyo daaweynta daacuunka, laakiin si fudud ayaa uu wax u dili karaa haddii aan la daweyn,” ayaa uu yiri Dave Croft, oo xiriiriye mashruuc u ah kooxda MSF ee wax ka qabashada daacuunka. Daacuunku waa cudur aad u faafa oo keena matag iyo shuban, taasna uu ka dhalato fuuq-bax daran oo loo dhiman karo. Cudurku waxaa uu badanaaba ku faafaa biyo iyo cunto fadaroobey.
MSF waxa ay dhammaan waaxihii daaweynta daacuunka ku wareejisey Wasaaradda Caafimaadka. Croft waxa uu sheegey in hawlgalku uu ahaa mid lagu guuleystey: “Hadda arrinta ma ahan mid degdeg ah. Nisbada dhibaatada/eelka iyo dhimashada cudurka ayaa hoos u dhacday.” Laakiin waxa uu sheegey in daacuunku uu ku xidideystey dalka ayna u badan tahay in uu sii faafo.
Taabbogalnimada hawlaha daacuunka ee dalka ayaa waxaa wax u dhimey waxyaabo kala duwan. Nidaamka caafimaadka ee Papua New Guinea oo ah mid aan dad ku filneyn, qaab-dhismeedka biyaha iyo fayadhowrka oo ah mid aad u liita iyo qaabka juqraafi ee dalka oo ah mid aan fududeyn. Koox dad tiradoodu yar tahay oo ku baahsan tuulooyin ay dhib badan tahay in la gaaro oo aadna u fog.
MSF waxa ay Papua New Guinea ka shaqeyneysey ilaa 2007dii. Marka laga soo tago hawlgalka degdegga ah ee wax ka qabashada daacuunka, kooxaheenna waxa ay daryeel caafimaad iyo mid nafsaani oo lacag la’aan ah ay dhibanayaasha ay waxyeelladu ka soo gaarto rabshadda ku dhisan jinsiga iyo tan guriga ka dhacda ku siiyaan Cusbitaalka Angau ee magaalada Lae (dalka ayaa leh mid ka mid nisbada ugu badan ee rabshadda ku dhisan jinsiga ee dunida oo dhan). Koox MSF ka socota ayaa sidoo kale ka shaqeyneysa magaalada Tari, iyaga oo daryeel caafimaad oo degdeg ah iyo mid qalliin dhibbanayaasha rabshadaha ku siinaya cusbitaalka Tari, oo ah tas-hiilaadka caafimaad ee keliya oo ka jira dhulka jiqda ah ee ku yaalla qabta galbeed ee dalka.
Tags: daacuun, gobolka Morobe, gurmad degdeg, Papua New Guinea